KISMAAYO(P-TIMES) – Afhayeenkii hore ee maamulka Jubbaland Cabdinaasir Maax Seerar oo haddana sheegtay in uu yahay Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in ay jiraan Siyaasiin badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo uu sheegay in ay hurinayaan colaado Sokeeye oo kadhaca Jubbaland, isla markaasna ay waqti galinayaan sidii ay u fulin lahaayeen danahooda siyaasadeed.
Karim waa muwadin reer puntland ah oo maan mugweyn leh. Waxaa qoraaladiisa ka mid ah….
SHICIBKA PUNTLAND AYAA NOQDAY DULMANAYAAL CABAAD IYO CABASHA KASOO HADHAY. WAA ISU QABE, CIDINA U QABIN ABAAL IYO WANAAG, COLAAD MOYEE¡¡¡¡
KASSIM hadalkiisu ma aha wax iska dheh ee waa xaqiiqada hortaal Reed puntland.
Dadkaaga iyo dalkaaga dulmi u diid oo Sida KAASIM ku biir¡¡¡
“XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND”
Sow kii afhayeenka , A. madoobe ahaan jirey, ma isagaa is doortay, hadana hanjabaya, adeer adigaa hadda dab qabiil shidaya, Odayaashaas Kismaayo guryohoodii baa ku yaal, ma garaneyno meesha aad ka timid. hadalka Siyaasadana waad ku dhacday. hadalkaaga ka fiirso.